Baaritaanka Deg-deg ah ee COVID-19 antigen oo la siin doono ardayda leh calaamadaha markay iskuulka joogaan; bixi ogolaansho si ardaygaaga loo baaro | Updates
Baaritaanka Deg-deg ah ee COVID-19 antigen oo la siin doono ardayda leh calaamadaha markay iskuulka joogaan; bixi ogolaansho si ardaygaaga loo baaro
Ka baarista COVID-19 ardayda leh calaamadaha xanuunka marka ay iskuulka joogaan waa habka ugu dhaqsaha badan ee dib loogu celin karo ardayda laga waayey xanuunka fasalkoodii waxbarashada. Laga bilaabo bishan, ardayda iskuulada Nawaaxiga Osseo kuwaas oo leh calaamadaha COVID-19 marka ay iskuulada joogaan waxay fursad u heli doonaan inay qaataan baarista antigen ee degdega ah iyadoo ay kormeerayaan qof shaqaale iskuulada ka socda oo tababaran. Si loo baaro, ardaygu waa inuu ku haystaa foomka ogolaanshaha faylkiisa oo ay saxeexeen waalidkiis/Masuulkiisa oo dhamaytiran.
Degmada 279 waxay isticmaali doontaa baarista degdega ah ee BinaxNOW rapid antigen si ay u baaraan ardayda calaamadaha leh markay iskuulka joogaan. Baarista BinaxNOW rapid antigen waa cudbi sanka banaankiisa (sanka xaga hore) oo leh caarad jilicsan oo dheer, ul debecsan oo la gelinayo sanka gudahiisa. Baarista waxaa ardayda calaamadaha leh lagu siinayaa lacag la’aan tan oo qayb ka ah deeq iskuulada la siiyey oo ka timi waaxda ka hortaga iyo joojinta cudurada ee CDC.
Qof shaqaale iskuulada u shaqeeya oo tababaran ayaa ka qaadaya baarista ardayda ka yar 14 kuwa 14 ka weyna ka caawinaya inay iska qaadaan baarista. Jawaabta waxaa lagu heleyaa 15 daqiiqo.
Ardayda leh calaamado iska caadi ah kuwaasoo laga waayo COVID-19 waxaa dhici karta in fasalkooda lagu celiyo markiiba. Ardayda leh calaamadaha ka dhigi kara kuwo aad u jiran inay iskuulka sii joogaan kuwaas oo laga waayey COVID-19 waxay u baahn doonaan inay guriga aadaan inta ka dhiman maalinta iskuulka, laakiin waxay awoodaan inay iskuulka ku soo noqdaan markii calaamaduhu soo roonaadaan – uma baahna inay 5 beri is karantiilaan. Ardayda iyo shaqaalaha la nool ardayga calaamadaha leh ee yimaada iskuulada degmada iskuulka way iska joogi karaan iyadoon loo eegayn haddii ardaygii laga waayey xanuunka iska joogo iskuulka ama guriga aado.
Ardayda lama baari doono ilaa ay keenaan foomka ogolaanshaha faylkiisa oo ay saxeexeen waalidkiis/Masuulkiisa oo dhamaytiran. Hadal afka ah kuma fila in ardayga la baaro. Fadlan Dib u eeg su’aalaha inta badan lays weydiiyo; haddii aa su’aalo qabto aad aragtid inaan laga hadlin, fadlan email u dir COVIDTeam@district279.org.
Waad ku mahadsan tahay inaad ka dhigto iskuulada bulshadeena mid caafimaad qabta.